Best Video ayeey Software & Apps u YouTube
Abuuritaanka YouTube video wanaagsan oo ku lug leh labadaba video ku toogtay ka dibna waxa sixiddiisa in la sameeyo wax soo saarka kama dambays ah. Maalmahan, kala duwan software video tafatirka iyo Chine ayaa diyaar u ah in aad ka dooran karto, ha ahaato mid raqiis ah ama qaali ah. Si lagaaga caawiyo in aad gaarto go'aan fiican, waxaan isku ururiso liiska ugu fiican software video tafatirka iyo Apps u YouTube. Qalabka kuwaasu caawin doona inaad wada dhejiya darbo badan galay oo wadajir ah, abuuridda ka dhaadhicinaya oo dhan.
iMovie waa macaamilka dhamaadka software video tafatirka Apple ee. Waa wax cajiib ah u fududahay in la isticmaalo iyo muujinta wax ku ool ah jiitaa-n-dhibic ka dhigaysa mid u fudud in la saxaa aad videos. Sidaa daraadeed, waxaad ku dari kartaa saamaynta, horyaal, soundtracks iyo gudato xilalka video tafatirka kale video. Marka tafatirka la sameeyo, in aad isla markiiba waxaa ku eegaan karo, badbaadin in HD u fiirinaya weyn-screen, gubi in DVD ama geliyaan si ay u YouTube.
Baro wax badan oo ku saabsan iMovie >>
# 2. Windows Movie Kan sameeyey,
Windows Movie Uumahaaga qalab free video weyn tafatirka iyo jirtay qayb ka mid ah nidaamka Windows sannado badan. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan oo ku jira hawlaha video tafatirka kala duwan. Waxaad si fudud isku dari kartaa videos iyo videos, ku dar kala guurka iyo saamaynta, geliso music ama dhawaaqa iyo tweak xawaaraha loo maqli ah, boostada si YouTube iyo in ka badan.
Baro wax badan oo ku saabsan Windows Movie Kan sameeyey >>
# 3. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Nidaamka qalliinka: Windows & Mac
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ogolaanaysaa ayaad ugu xaalkaa videos in la eego la yaab leh. Waa sahlan tahay, isticmaalka hawlaha tafatirka classic sida goo, dalagga, isku shaandheyn iyo xirfad dheeraad ah sida screens horyaalka iminka, saamaynta filter midabo, saamaynta guurka / mooshin. Waxaa xitaa kaa video sii leh gaar ah sida Intro / screens credit, PIP, screen cagaaran, wareeg ah usii, isku dari kara mosaic, ka horimaanaya oo dheeraad ah. Marka aad dhamaysid video abuurka, ka dhigi web-diyaar u ah inay geliyaan si ay u YouTube iyo Facebook.
Baro wax badan oo ku saabsan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) >>
Nidaamka qalliinka: Windows & Linux
Lightworks waa aalad video tafatirka free weli awood badan. Waxaa la iman interface user-friendly ah, gebi ahaanba taageertaa qaab video kasta oo siisaa qalab heer xirfadeed oo kala duwan. In kasta oo ay u baahan tahay qalooca uga yaacday ilaa waxbarashada, aad ugu dambeyntii ka heli doontaa waxa ay leedahay wax badan si ay u bixiyaan. Haddii aad raadineyso weeyna ah xirfad YouTube video editor la awoodi karo, ma this mid ka maqnaan!
Badan oo ku saabsan Lightworks Baro >>
# 5. Adobe jilitaankii Qaybaha
Adobe jilitaankii Qaybaha waa version ah qaaddey-hoos ee Adobe jilitaankii Pro oo loogu talagalay in lagu editor laylis iyo macaamiisha. Waa miisaaniyad xirfad video editor oo kuu ogolaanaya in aad la qaab kasta oo file video shaqeeyaan, iyo waxa ku jira oo dhan qalabka aad u baahan doontaa inaad wax ka bedel iyo turxaan aad videos. Marka habka tafatirka ay ka badan tahay, oo aad si toos ah u gali kartaa videos in Facebook ama YouTube.
Sony Vegas Pro waa video editor-dhamaadka sare ka buuxaan muuqaalada tafatirka weyn looga cabsado. Waa la jaan qaada dhamaan qaabab video iyo qoreysa-waqtiga dhabta ah multi-track video iyo tafatirka audio, xal-madax banaan video horumarintooda, saamaynta adag iyo qalab compositing, ka siib-in taageero saamayn, iyo Dolby Digital hareerayn qodan dhawaaqa.
Baro wax badan oo ku saabsan Sony Vegas Pro >>
# 7. Video qalabeed
Video qalabeed Waa anfacaya online editor video ah oo u suurta galinaya in aad si fudud u samayn hawlaha kala duwan video tafatirka. Waxa ay taageertaa badan oo qaabab video oo ay la socdaan bixinta qaab tayo sare leh oo wax soo saarka. Qaababka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dalagga, darsamaan, demux, subtitles hardcode iyo sidoo kale diinta iyo download videos. Si kastaba ha ahaatee, waxaad gali kartaa oo kaliya videos ilaa 600 MB.
Dheeraad ah ka baro Video qalabeed >>
Waxaad u baahan kartaa app a video tafatirka xirfadeed si ay u dhinto, edit, milmaan ama ku darto music dumaya kasta. Halkan AndroVid Video Editor caawin kara. Ka sokow hawlaha video tafatirka aasaasiga ah, waxa ay sidoo kale ku siinayaa faa'iido ah ee ku daray qoraalka, loox iyo saamaynta aad videos. Waxa kale oo aad dooran kartaa loox inay videos, kuwaas oo marka hore la soo bandhigi doonaa shaashadda ah daawadayaasha. Oo waxyaalahaas oo dhan, waa ah YouTube app video tafatirka fiican ee Android.
Baro wax badan oo ku saabsan AndroVid Video Editor >>
# 9. Ciidamada YouTube
Nidaamka qalliinka: macruufka (iPhone & iPad)
Ciidamada YouTube waa iPhone iyo iPad app quduuska Google ayaa lagu qoro iyo in la wadaago video on YouTube. Waxaa aad u saamaxaaya in ay qabsadaan videos iyo dhejiya wada clips badan Abuur aan xuduud lahayn. Hawlaha ugu muhiimsan ee tafatirka waxaa ka mid ah dib u dhigaa ama jar clips shaqsi, ku dar soundtrack ka ururinta music ama maktabadda audio u gaar ah. Waxa kale oo aad gali kartaa adiga oo video in YouTube oo isku mar boostada in dhammaan shabakadaha bulshada.
Badan oo ku saabsan Ciidamada YouTube Baro >>
Nidaamka qalliinka: Android & macruufka
Magisto waa video app si sahlan loo isticmaalo tafatirka, waayo, waxaad si toos ah xaalkaa aad videos ka phone smart. Just geliyaan aad video, dooro theme aad jeceshahay iyo music iyo ha app samayn inta kale ee aad u. Muuqaal kale oo fiican waa in, app this si toos ah u dooran kartaa goobaha ugu wanaagsan ee ka videos iyo abuuro gaaban videos.
Baro wax badan oo ku saabsan Magisto >>
> Resource > Apps > Best YouTube Video ayeey Software & Apps